WLDH ovundlile Iribhoni Mixer - China Changzhou Daming Pharmaceutical Izinsiza kusebenza
WLDH ovundlile Iribhoni Mixer
Eyh Series ababili Mixer D
DSH Series Double Intulo Isigaxa mixer
FL Fluid Umbhede Granulator
YPG Series Pressure Ikani nokomisa
GFG Series High-Ukuphumelela Fluid Umbhede nokomisa
Ukusebenza Isimiso Lo mshini yakhiwa esitsheni, isikulufa amaphini eshukumisayo nezingxenye zesikhashana; le gwedla isikulufa ngokuvamile yakhiwa ku 1 isendlalelo noma 3 izingqimba, screw yangaphandle bukhomba indaba maphakathi kusukela izinhlangothi ezimbili, futhi ungqimba engaphakathi isikulufa lidlulisela ezibonakalayo izinhlangothi ezimbili kusukela maphakathi, ukuze kusuka Ukubika Inkinga YeWindows kuhlangana . Izici Coefficient Big yokulayisha, indawo encane ngimatasa futhi. Kunzima ukuhlanza uma isetshenziselwa mix impahla viscous noma ingcina. ...
Lo mshini yakhiwa esitsheni, isikulufa amaphini eshukumisayo nezingxenye zesikhashana; le gwedla isikulufa ngokuvamile yakhiwa ku 1 isendlalelo noma 3 izingqimba, screw yangaphandle bukhomba indaba maphakathi kusukela izinhlangothi ezimbili, futhi ungqimba engaphakathi isikulufa lidlulisela ezibonakalayo izinhlangothi ezimbili kusukela maphakathi, ukuze kusuka Ukubika Inkinga YeWindows kuhlangana .
Coefficient Big yokulayisha, indawo encane ngimatasa futhi.
Kunzima ukuhlanza uma isetshenziselwa mix impahla viscous noma ingcina.
Material okwakumelwe zixutshwe
Mixer iribhoni isetshenziswa ukuxuba viscous noma ingcina powder impahla, noma ukuxutshwa kwenkathi powder edinga ukwengeza ketshezi, nokunamathisela impahla. Phakathi naleso sikhathi, ngoba kunzima ukuhlanza impahla viscous, umshini kufanelekile kunjalo kuhlangana, lapho wokukhipha mkhulu futhi asikho isidingo we displacing ezihlukahlukene impahla njalo.
okuxubile lemali / batch
Qaphela: imikhiqizo eshiwo ngaphezulu ingenziwa carbonaceous steel C noma insimbi engagqwali P
Previous: SYH Series ezintathu D Mixer
Okulandelayo: VHJ uchungechunge mixer
Blade Ukuxuba Machine
kabili Isigaxa Mixer
kabili oyindilinga Mixer
Umanyolo ukuxuba Machine
Umanyolo Powder Ukuxuba Machine
High ngokuyikho Pharmaceutical Ukuxuba Machine
Laboratory Rubber ukuxuba Machine
Mixer / Ukuxuba Nge Engine Asizayo
Pharmaceutical Ukuxuba Machine
Powder Ukuxuba Machine
Rubber Ukuxuba Machine
Tank Model ukuxuba-Machine
ezintathu D Iminyakazo Mixer
umkhombe Uhlobo Mixer
umkhombe Uhlobo Ukuxuba Machine
Wldh Series ovundlile Iribhoni Mixer
VHJ uchungechunge mixer
HJ Series double Isigaxa mixer
SYH Series ezintathu D Mixer